Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Fametraham-pialana mendri-piderana saingy….
Inty sy Nday: Fametraham-pialana mendri-piderana saingy….
Isan’ny ady hevitra mbola ifotoran’ny resaka etsy sy eroa hatrany ny momba ilay tarehi-marika ara-bola voarakitra tao anatin’ny tatitra avy amin’ny antokon-draharaha misahana ny fanaraha-maso ny fanomezana tsenambaro-panjakana na ilay “Autorité de regulation des marches publics” (Armp)
Raha tsiahivina fotsiny dia nahatratra 9.000 tapitrisa ariary mahery ny voalaza fa hoe vola navoaka ho sandan’ny fividianana kojakoja sy kodiarana ho an’ny fiara iray 4×4 teo anivon’ny ministeran’ny Filaminana anatiny tamin’ny taom-piasana 2016. Na tsy ny tenany aza no nahavita nanao an’iny, na fahadisoana iny na tetika maloto hamoahana volam-panjakana, dia nahatsapa ny andraikiny ny tale jeneralin’io antokon-draharaham-panjakana (Armp) io, Ingahy Tovoherihavana Philibert, ka nametraka taratasy fialana amin’io andraikitra sy toerana nosahaniny io. Tena fihetsika mendri-piderana izany, ary efa manahaka ny ataon’ny olona tompon’andraikitra any ampita any. Raha ny marina aza dia ny minisitry ny Vola izay miahy mivantana an’io antokon-draharaha “Armp” io mihitsy no nametra-pialana.
Tsaroan’ny maro tsara, angamba, tany ampita tany, fa nisy lozam-pifamoivoizana an-dalambe nitranga, izay nahasimbana fiaran-dalamby sy namoizana ain’olona ary naharatrana olona maro. Tsy ny minisitra ny fitaterana no nanamory an’ilay fiaran-dalamby. Izy koa tsy tao anatin’ilay fiaran-dalamby, fa noho ny fahatsapany ny andraikiny dia nametra-pialana izy. Mendri-piderana tanteraka ny fihetsik’Ingahy Philibert Tovoherihavana. Ny mahalasa eritreritra anefa dia hoe nolavin’ny minisitra ny Vola io fametraham-pialana io. Fa nahoana kosa? Sa hisolo vaika azy ny minisitra ny Vola ?
Ny tompon’andraiki-panjakana moa dia mbola manamarin-tena amin’ireny tranga ireny fa hoe “fahadisoana teo amin’ny fampiasana ny milina fanoratana ka nahatonga ny tarehi-marika “Zero” ho nihoatra telo”. Na inona na inona ambara aloha dia nisy fahadisoana tao, ary tsy fahadisoana maivana ka hotsotsorina amin’ny fomba fahaiza-miresaka fa ahitana taratra ny fanararaotan’ny sasany ny fahefam-panjakana ireny. Azo antoka mihitsy fa raha sanatria tsy nisy nahatsikaritra izao iny dia ohatran’ny tsy nisy, ka ny vola efa tafavoaka tamin’izy iny dia efa “nadio ny rano nitan’izay nanao azy”.
Avelao halalaka ny fisainan’ny tsirairay fa ianareo mpitondra ambony ao no efa tsy mahalala menatra intsony ka miziriziry amin’ny tsy mety ataonareo e !
Izao dia mbola sahin’ny minisitra ny Vola ihany indray ny mandrahona ny mpiasam-panjakana mba hanaja ny tsiambaratelon’ny antontan-taratasim-panjakana, hono. Satria nosokajiany fa mpiasam-panjakana no tsy maintsy namoaka ireny antontan-taratasy nirakitra ny volabe nangalarina sa nahodina momba ny fividianana kojakoja fanolo sy kodiarana ho an’ny fiara iray ireny. Ambony lavitra noho ny fahamarinana ange izany ny halatra sy ny fanajana ny tsiambaratelon’ny antontan-taratasim-panjakana nanaovana halatra ho an’ny tompon’andraiki-panjakana sasany e !